Olee otú iji tọghata ID3 Tag?
Olee otú iji tọghata ID3 Tag
Gịnị mere ị chọrọ iji tọghata ID3 Tag?
Mbụ, ka-esi ruo isi. Ọ bụrụ na ị hụrụ n'anya music, ị ga-ahụ n'anya a kwesịrị ekwesị ID3 Tag. Nke a bụ n'ihi na ọ bụ ID3 mkpado na-enye gị ohere na-echekwa ozi dị ka aha omenkà, album, track, na ozi ndị ọzọ banyere song na otu faịlụ ahụ. Converting a ID3 mkpado ga-enyere gị idozi gị songs na ike ọhụrụ playlist dị irè karị. Ebe a bụ ụfọdụ n'ime uru ndị converting a ID3 mkpado.
- Jikọta songs ngwa ngwa na-adị mfe
- Ịchọ a songs bụ mfe karịa mgbe
- Ị ga-amata ihe nile banyere song site na otu faịlụ.
Olee otú iji tọghata ID3 mkpado na Windows / Mac OS / Linux
Achọ iji tọghata ID3 mkpado gị na laptọọpụ ma ọ bụ kọmputa? N'agbanyeghị ihe OS ị na-agba ọsọ, e nwere ụzọ dị mfe iji tọghata ID3 mkpado. Ebe a bụ anya na nke 3 nke kasị mma nhọrọ maka converting ID3 mkpado Windows, Mac OS na Linux.
1. Part I. atọ atụ aro ID3 Tag Ntụgharị maka Windows Computers.
2. Part II. Atọ atụ aro ID3 Tag Ntụgharị maka Mac OS
3. Part III. Atọ atụ aro Ntụgharị maka Linux.
Part I. atọ atụ aro ID3 Tag Ntụgharị maka Windows Computers.
1.Tag & Gbanwé aha
Short Nkowasi: Tag & Gbanwé aha bụ ewu ewu convertor mepụtara Softpointer. Ọ na-akwado, ID3v1, ID3v2.2, ID3v2.3 na ID3v2.4 mkpado maka mp3 faịlụ. Ọ na-agụnye ọtụtụ ndị isi faịlụ formats dị ka wma, asf, WMV, mp4, na ọtụtụ ndị ọzọ.
Olee otú iji tọghata:
1. Mepee software na-aga faịlụ na ị chọrọ mkpado site n'aka ekpe panel.
2. Right pịa na faịlụ ịchọrọ ịgbakwunye na mkpado ma pịa Dezie File Tag.
3. Tag nchịkọta akụkọ window ga-emeghe ma na ị nwere ike ịgbakwunye niile dị mkpa ọmụma ka ya na pịa Chekwa iji Njikwa.
Ahịa: Site $ 32to $ 158 dabere na version
Short Nkowasi: Ọ bụ smart tagger software na ejisie, na-ahazi na ọcha gị music collection. Ọ synchronizes na metadata na online ọdụ data.
1. Mepee software na ihe nchọgharị na nchekwa nke gị faịlụ. Wee pịa na Idozi songs.
2. Na-esote window, jide n'aka na ị na-abanye isi nkọwa, egwuregwu, osise, Format, File akpọ, na Save. Pịa na mmalite.
3. Mgbe mmalite, ọ akpaghị aka mmelite ozi nke songs scanned si nchekwa.
Ahịa: $ 19
Short Nkowasi: Nke a software-enyere gị aka jikwaa mkpado ebe i nwere ike tinye omenkà, genre, aha, wdg Sobolsoft amalite a software. Ị nwere ike Ibu Ibu multiple faịlụ ma jikwaa ya mkpado.
1. Tinye MP3 faịlụ site mfe nchọgharị na họrọ faịlụ.
2. Fụọnụ ị ga-ahụ dị iche iche na kọlụm maka omenkà, soro wdg E ị nwere ike ịgbanwe zuru ezu.
3. Zọpụta edits ma ọ bụ mbupụ nju na XML format wdg
Part II. Atọ atụ aro ID3 Tag Ntụgharị maka Mac OS
1. iSkysoft Audio teepu maka Mac
Short Nkowasi: Iskysoft Audio teepu maka Mac bụ omume na ike ga-eji dị ka ID3 mkpado nchịkọta akụkọ. Ị nwere ike ịmata songs ma dezie ha ID3 mkpado. Ọ na-ọma ike na iTunes.
1. Na iTunes mgba ọkụ ka ọbá akwụkwọ site na ịpị Library.
2. Mgbe ahụ nri pịa music ị chọrọ ịmata.
3. Ọ na-akpaghị aka na-egosipụta songs.
Short Nkowasi: Kid3-enye ohere mkpado multiple faịlụ dị ka MP3, Vorbis, FLAC, MPC, MP4 / AAC, WMA, WAV na-enweghị pịnyere ozi maka onye ọ bụla usoro.
1. Jiri igodo panel na-emeghe faịlụ ịchọrọ ikpado.
2. Mgbe ị pịa na faịlụ, ị ga-ahụ ugbua ẹdude ọmụma.
3. Ị nwere ike ịhọrọ dezie site na ịpị edit na mgbe ahụ ịzọpụta ọmụma. .
Short Nkowasi: TuneUp dị ukwuu software maka ijikwa collection nke music ma na-ahazi ha. Ị nwere ike idozi song ọmụma, nke na-ezighị ezi na-ihichapụ oyiri tracks.
1. Dị nnọọ emeghe iTunes na-ele faịlụ na Library.
2. Ọ na akpaka Doppler maka ozi. Ị nwere ike idozi faịlụ na-atụ uche ọmụma.
3. Dị nnọọ dezie si nri panel nke TuneUp.
Part III. Atọ atụ aro Ntụgharị maka Linux.
Short Nkowasi: EasyTAG bụ ịba uru software maka mkpado maka usoro dị MP3, MP2, Ogg Vorbis, FLAC, MusePack na ọtụtụ ndị ọzọ. Ọ na-eji GTK + GUI.
1. Mepee ngwa na-aga na nchekwa nke ị faịlụ site na iji navigation panel nke ekpe.
2. Họrọ faịlụ i chọrọ mange na mkpado.
3. Na nri panel n'okpuru ID3 Tag, ịgbanwe ọmụma.
2. Audio Tag Ngwá Ọrụ
Short Nkowasi: Ọ bụ usoro ihe omume nke ejisie ọmụma na MP3 na Ogg Vorbis. Ị nwere ike ịkpado faịlụ otu otu ma ọ bụ mee uka geo nke faịlụ na otu na ọ bụla usoro ị chọrọ.
1. Mepee ngwa na iji na-arụ ọrụ Directory, na-emeghe nchekwa gị songs.
2. Họrọ faịlụ i chọrọ jikwaa mkpado.
3. Na nri, n'okpuru Dezie Tag nnọọ ime achọrọ edezi ịgbanwe ọmụma.
Short Nkowasi: ukwu a na ngwá ọrụ mkpado akakabarede. Otú ọ dị, ị ga-achọ Wine software na gị Linux na-agba ọsọ a software.
1. Wụnye Wine software Tupu wụnye Mp3 mkpado.
2. Mepee software na họrọ faịlụ na ị chọrọ jikwaa.
3. Gaa Mp3tag Nhọrọ ma na-eme ndị dị mkpa akakabarede.
Achọ ịmatakwu banyere otú ndị a software ọrụ? Ị nwere ike ịga Mmepụta saịtị maka ozi ndị ọzọ na nkọwa banyere Tag akakabarede.
Idozi Ndakọrịta Nsogbu maka Samsung Galaxy S5 & N'okpuru ebe
> Resource> tọghata> Olee otú iji tọghata ID3 Tag